Omenala Bolivia | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Bolivia, Nduzi
Ọ bụrụ na ịmaghị South America, ikekwe ị maghị ihe Bolivia Ọ bụ mba nwere ọtụtụ akụkụ ma yabụ na ọ gaghị ekwe omume ịsị na ọdịnala ya na omenala ya bụ otu. N’ezie, ha dịgasị iche dị ka agbụrụ ndị mejupụtara obere mba America a bara ọgaranya.
Okpokoro agbaze nke otu ndi otu na Bolivia nwere mgbọrọgwụ na narị afọ iri gara aga nke ala a kamakwa na ihe nketa nke ndị Spen, yabụ ebe a bụ ntakịrị ihe niile jikọtara ndị ọbịa a egwurugwu omenala di ebube. Ka anyị mara mgbe ahụ ụfọdụ n'ime omenala nke Bolivia.
2 Omenala Bolivia
Ọ bụ na South America na aha ya bụ taa Obodo Plurinational nke Bolivia, na-egosipụta kpọmkwem agbụrụ dị iche iche mejupụtara ya. Ọ nwere obodo abụọ dị oke mkpa, sugar (isi obodo na isi obodo), na La Paz (oche ochichi), na ọtụtụ asụsụ gọọmentị, Quechua, Spanish, Aymara, Guaraní, n'etiti asụsụ iri atọ na atọ ndị ọzọ.
Ndị mmadụ bi gburugburu Mmadụ nde 10 na oge ochie ya, onye nketa nke ọdịbendị Tiwanaku, Moxeña ma ọ bụ Inca, dịka ọmụmaatụ, site na ịgafe na Spanish mepụtara ihe na-adọrọ mmasị ọdịnala ọdịnala.
Ndị Bolivia nọ n'ozuzu ezigbo enyi na ezigbo ezinụlọ. Ọ bụ ezie na okpukpe Katọlik nwere mkpọrọgwụ siri ike, ọ ka na-abụkarị di na nwunye ibikọ ọnụ tupu ha alụọ. A na-echekwa ụfọdụ omenala Ndị Kraịst ma bụrụ ihe kpatara nnọkọ na iri nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, dịka agbamakwụkwọ, baptism ma ọ bụ olili ozu.
O doro anya Omenala dị iche iche dabere na mpaghara nke obodo yana dịka otu ndị mmadụ si dị, dị ka ebe niile. A ghaghi iburu n'uche na ndi Spani ike lekwasịrị anya na nrigbu nke Oruro na Potosí, ya mere, ndi ugwu, ndida na ndida anyanwu fọrọ nke nta ka agbahapụ ha, nke mere na n'akụkụ ndị a nke obodo enwere ọdịnala ndị amaala na ndị pere mpe nke Europe. ... N’uzo ụfọdụ, echiche eburu ụzọ banyere otu ọdịnala Bolivia metụtara ndụ na Andes, mana n’eziokwu enwere ọtụtụ ihe.
Otu n’ime ihe na-amasị m ime ihe kachasị mma mgbe m na-eme njem bụ ịnwale nri mpaghara, yabụ ụdị nri dị a Bolaa dị na Bolivia? Na ụkpụrụ, ọ bara uru ịsị na e nwere ụdị ihe oriri nke mpaghara ahụ nke a na-emeghachi na mba ndị agbata obi: ndukuọmụmaatụ Papa. A na-ewu ewu na tuber a na mpaghara ugwu ugwu ọ bụla ma ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ha aha chuo. na ọka Ọ bụkwa kpochapụwo ọ bụ ezie na ichefu maka nke ị maara n'ihi na enwere ọtụtụ ebe a.
Ga-ahụ efere dabere na ọkụkọ, atụrụ, atụrụ ma ọ bụ ehi ehi, osikapa na nza ofe. Ezi ntụziaka dị iche iche site n’obodo ruo n’obodo, mpaghara na mpaghara, mana buru n’obi na ọ bụghị nduku na ọka niile na enwere mkpụrụ osisi ebe okpomọkụ, mkpo, soybean na ọtụtụ akwụkwọ nri Ọzọkwa. Ọ na-amasị m tamale, jiri ọka na-acha ọcha nke bọta, chili, anụ anụ na yabasị, na humita na chala, ọbọp ke nsị ọka. Ọ bụ ihe obi ụtọ!
N'ikwu eziokwu, n'ozuzu ya, anyị nwere ike ikwu nke ahụ na ogbe gastronomy na-emetụta onye agbata obi ya Brazil na Europe na Asia (Santa Cruz dị ebe a), enwere nri anụ karịa n'ihi na ọ bụ ebe a na-azụ anụ ụlọ, na na mpaghara Andean gastronomy na-adịkarị oseose.
Enwere ọtụtụ ahịa na obodo ma ọ bụrụ na iri n'okporo ámá anaghị atụ gị ụjọ, ha bụ ezigbo ebe iji nwaa ekpomeekpo mpaghara. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na obodo ị nwere ike ịga ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ọ bụ ezie na, n'ezie, ọ bụghị otu. Ọ bụrụ na ị nọ n'ime Santa Cruz rụba nke ahụ ama Ọ bụ ebe a ma ama maka anụ ya. Ndị mmadụ nọ ebe a hụrụ anụ ahụ n'anya, yabụ ọ bụrụ na ị pụọ maka ije ije, gagharịa n'okporo ụzọ Equipetrol ma ọ bụ ụzọ Monseñor Rivero ebe ha nwere ụlọ mmanya, ụlọ nri na ebe a na-ere nri. Na La Paz otu ihe ahụ na-eme na mpaghara ndịda ma ọ bụ na Prado ma ọ bụ San Miguel.
Na-akwanyere omenala obodo Ndị Bolivia na-emekarị oge ezumike nke etiti ututu. Ọ naghị adị ihe karịrị ọkara otu awa ma ọ gụnyere iri ihe, a mmetụ, dị ka ha na-ekwu gburugburu ebe a. Ọ bụ empanada jupụtara na anụ, akwa, oliv na akwụkwọ nri ọtụtụ na-atọ ụtọ. Mgbe ọ bụla n'etiti ehihie, echefula salteña. Na n'etiti ehihie, kama ka oge tiiGa-ahụkwa na ọtụtụ na-anọdụkarị ala na-a drinkụ tii ma ọ bụ kọfị.
E nwere ọtụtụ ụlọ ahịa kọfị ma ọ bụ ụlọ tii, karịsịa na La Paz, Santa Cruz ma ọ bụ Cochabamba. Nri abalị, ka ọ dị ugbu a, enye n'etiti 8 na 9. Ọnọdụ ihu igwe Bolivia dị iche iche ka ọ na-emetụkwa nri. N’ebe ndị a na-ekpo ekpo, ndị mmadụ na-erikarị ice cream na ihe ọ juụ juụ na iko elekere ise, dị ka ihe atụ.
Mgbe ehihie na-ehi ụra ya mere ọtụtụ ụlọ ahịa na-emechi mgbe ụfọdụ n’etiti 12 na 3 n’ehihie. Nri ehihie dị ogologo ma enwere ndị ọrụ na-alaghachi n'ụlọ iji soro ezinụlọ ha rie nri ehihie, dịka ọmụmaatụ, ọkachasị mgbe anya adịghị mkpụmkpụ. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ akụkụ nke Latin America na ụkpụrụ omume dịkwa ka yabụ ọ bụrụ na ị gaferela akụkụ a nke ụwa, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla.
Onye Bolivian ga-adịkwu n ’mma ma bụrụ enyi gị n’ ebe ọ matara gị ogologo oge wee bụrụzie nke dị jụụ. N'ebe a ị naghị eri nri n'aka gị, belụsọ maka ihe nkịtị nke mmadụ na-eri dị ka nke a (sandwiches, hamburgers), a na-agafe nnu site na ịdakwasị ya na tebụl (ọ bụ ihe ọjọọ ịgafe ya n'aka aka), nke nkwanye ugwu bụ ịda na onyinye ma ọ bụrụ na Ha kpọọ ụlọ, okooko osisi, chọkọletị, mmanya, ma ọ bụrụ na enwere ụmụaka ihe maka ha na ụdị nkọwa ahụ ugbu a anyị na-ahụ n'ọtụtụ mba.
Qukpụrụ omume ahụ dịgasị iche iche dabere ma ị gara n'ụlọ ezinụlọ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ withụ na ndị enyi ma ọ bụ nri ehihie azụmahịa. A na-ekwu na n'ozuzu ndị Santa Cruz nwere obi iru ala n'okwu a karịa ndị bi na mpaghara Andean, dịka ọmụmaatụ, mana nke ahụ apụtaghị na ị nwere ike ịga rie nri na flip-flops.
N'ikpeazụ, Enwere omenala ndị dị egwu na Bolivia? Ee. Cgbọ ala na-agọzi, ọmụmaatụ. Onye ụkọchukwu Katọlik na-agọzi ụgbọala ndị ahụ kwa ụbọchị na elekere iri nke ụtụtụ na Copacabana, n'ụsọ Ọdọ Mmiri Titicaca n'ememe nke ọkụ ọkụ na mmanya na-akọghị n'ụgbọ ọ bụla. Omenala ọzọ bụ guo chioma na akwukwo coca. Oku ahụ yataris ha na-aguta uba site na itinye akwukwo coca n'ime ikuku ma na-akowa ihe di iche n'odinihu dika ha si ada.
Na-aga Bolivia na Nọvemba? Mgbe ahụ ị nwere ike isonye na nnọkọ nke Deathbọchị ọnwụ niile. Na mbido ọnwa ahụ, ndị Aymara nke ala ọdịda anyanwụ na-achọ okpokoro isi mmadụ mma, na-achọsi ike ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ chebe ma gwọọ ha. Ọ bụrụ na okpokoro isi bụ onye ikwu, nke ka mma, ọ bụ ezie na izu ohi ili yiri ka ọ bụ ụbọchị ...
N'otu uzo a ma oburu na ijeghari ebe ndi ama ama Ahịa Ahịa La Paz Gha ahu umuaka llamas ndi mmadu choro ka ha lie ha n'ulo ohuru ha na acho amara nke Pachamama, Nature Nature.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Bolivia » Omenala Bolivia
Omenala ndị Cuba